Ihe omuma ndu 5 ka imuta site na Jisos | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ihe omumu nke ndu site na Jisos 1. Mee ka ihe ị chọrọ doo anya.
“Rịọ ma a ga-enye gị; chọọ, unu ga-achọta; kụọ aka ma a ga-emeghere gị. N'ihi na onye na-arịọ, na-anata; ma onye na-achọ, na-achọta; onye ọ bụla kụrụ aka, a ga-emeghere ya “. - Matiu 7: 7-8 Jizọs maara na idoanya bụ otu n'ime ihe nzuzo nke ihe ịga nke ọma. Kpachara anya na ibi ndụ gị. Gwa ya ihe ị chọrọ inweta. Mara ihe ị ga-ajụ na otu esi ajụ.
2. Mgbe ịchọtara ya, were ya futuo.
Ala-eze elu-igwe yiri àkù nke di n'ọhia, nke madu huru, zobe kwa; Ọzọkwa, alaeze eluigwe dị ka onye ahịa na-achọ nkume pel ọma. Mgbe ọ hụrụ nkume pel dị oke ọnụ ahịa, ọ gara ree ihe niile o nwere wee zụta ya “. - Matiu 13: 44-46 Mgbe ị chọtara nzube ndụ gị, ebumnuche ma ọ bụ nro, were ohere ahụ ma wụli elu n'okwukwe. Nwere ike ma ọ bụ na ị gaghị eme ya ozugbo, mana ị ga-aga nke ọma. Ọụ na mmezu dịkwa na ọchụchọ ahụ. Ihe ndị ọzọ niile bụ naanị icing na achicha ahụ. Gaa na ebumnuche gị!
Jizọs na-akụziri anyị banyere ndụ
3. Nwee ndidi ma hụ ndị na-akatọ gị n'anya.
“Younụ anụla ka a sịrị: 'Anya laara anya, ezé laara eze.' Ma asim unu, eguzogidela ndi ọjọ. Mgbe mmadụ kụrụ gị na (aka nri gị), tụgharịakwa nke ọzọ. "- Matiu 5: 38-39" heard nụrụ na a sịrị: "You ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya ma kpọọ onye iro gị asị." Ma asim unu, hunu ndi-iro-unu n'anya, n praykpe kwa ekpere nye ndi nutesob youu unu, ka unu we buru umu nke Nna-unu Nke elu-igwe: n'ihi na Ọ n makesme ka anyanwu-Ya wawakwasi ndi ọjọ na ezi madu, Ọ n makesme kwa ka miri zokwasi ndi ezi omume na ndi ajọ omume.
Ihe mmụta ndụ Jizọs: N’ihi na ọ bụrụ na ị hụrụ ndị hụrụ gị n’anya n’anya, olee ụgwọ ọrụ ị ga-enweta? Ọ̀ bụ na ndị ọnaụtụ anaghị eme otu ihe ahụ? Ọ bụrụkwa na ọ bụ naanị ụmụnne gị ka ị na-ekele, olee ihe dị iche na ya? Ọ bụ na ndị ọgọ mmụọ anaghị eme otu ihe ahụ? ”- Matiu 5: 44-47 Mgbe a na-akwaga anyị, ọ ga-adịkarịrị anyị mma ịlaghachi. O siri ike ịghara imeghachi omume. Ma mgbe anyị mere ka ha bịaruo anyị nso karịa ịchụpụ ha, chee ụdị ịtụnanya ahụ. A ga-enwekwa obere esemokwu. Ọzọkwa, ọ bara uru karịa ịhụ ndị na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ ụgwọ. Jiri ịhụnanya zaghachi mgbe niile.
Ihe omumu nke ndu site na Jisos
4. Na-agafe mgbe niile karịa ihe achọrọ.
“Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso gị uwe mwụda gị, nye gị uwe mwụda gị. Ọ bụrụ na mmadụ amanye gị itinye onwe gị n'ọrụ maka otu maịl, soro ha gaa kilomita abụọ. Nye ndị na-arịọ gị ma atụgharịla azụ ndị chọrọ ibinye ego “. - Matiu 5: 40-42 Gbalịsie ike ime njem: n’ọrụ gị, azụmaahịa gị, na mmekọrịta gị, na ije ozi, n’ịhụ ndị ọzọ n’anya na n’ihe ọ bụla ị na-eme. Chụsoo oke mma na azụmaahịa gị niile.
5. Mee nkwa gị ma kpachara anya banyere ihe ị na-ekwu.
"Ka ee gị bụrụ 'ee' ka ea gị bụrụ 'e'" - Matiu: 5:37 "Site n'okwu gị a ga-agụ gị ikpe, a ga-esitekwa n'okwu gị maa gị ikpe." - Matiu 12:37 Enwere ilu ochie kwuru sị: "Tupu ikwu otu oge, chee echiche ugboro abụọ". Okwu gị na-achịkwa ndụ gị na nke ndị ọzọ. Na-ekwu eziokwu mgbe niile n’ihe ị na-ekwu ma na-atụkwasị obi na nkwa gị. Ọ bụrụ na ị na-enwe obi abụọ banyere ihe ị ga-ekwu, kwuo okwu ịhụnanya.